Safal Khabar - रामेछापदेखि सुर्खेत हिँडेका यात्री भन्छन्,– सुर्खेत पुग्दासम्म बाँचिएछ भने अर्को निर्वाचनमा दललाई सिकाउँछु अंकगणित
रामेछापदेखि सुर्खेत हिँडेका यात्री भन्छन्,– सुर्खेत पुग्दासम्म बाँचिएछ भने अर्को निर्वाचनमा दललाई सिकाउँछु अंकगणित
शनिबार, २९ चैत २०७६, १६ : २८
चितवन । हामीले सुनेका थियौं हाम्रा हजुरबुवाहरु एक साताभन्दा बढी समय लगाएर स्याङजा, पाल्पा, बागलुङ लगायतका पश्चिमी पहाडबाट तत्कालिन बटौली अर्थात अहिलेको बुटवल र सिमावर्ती भारतीय बजारमा नुन किन्न आएका कथा । १ घण्टा पनि हिड्न नसक्ने, एक छिन् हिड्ना साथ लगलगी काप्ने हाम्रा खुट्टाहरु र ढुकुरको जस्तो कमजोर मुटु भएका हामीहरुलाई हाम्रा पुर्खा र पूर्वजको अनुभव र भोगाई बेतुकका गफ जस्तो लाग्थ्यो तर आज परिस्थिीतीले हामीलाई ठ्याक्कै त्यही स्थानमा पुर्याएको छ ।
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असरको प्रभावले सृजित लकडाउनका कारण अहिले देश ठप्प छ । सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा र लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा त्यसबाट सृजित पछिल्लो अवस्थाले हामीलाई यही हजुरबुबाको पालाको कथा र अवस्थालाई अनुसरण गर्न बाध्य बनाएको छ । घर आडैको किराना पसलमा एक ढेडी खुर्सानी किन्न पनि हिँडेर जान नसक्ने हामीहरुलाई अहिले कोरोनाले रात दिन त्यो पनि हप्तौहप्ता हिड्नु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना गरिदियो । केही दिन यता यस्तै अवस्था सृजना भइराखेको छ । ७÷८ सय किलोमिटरको दुरी समेत मानिसहरु हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्ने आशामा बाटो तताएका छन् । त्यो पनि मात्रै पानीको भरमा । अहिले पैसा भएर पनि खान पाउने अवस्था छैन् । यात्रामा कसैले दयाले केही दिए त्यसैलाई सन्जिबनी बुटी मानी स्वीकार्दै यात्रा तय गर्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन् । दया गर्नेहरुलाई र दया स्वीकार गर्नेहरुलाई पनि एक खालको त्रास भने मनमा रहने छ त्यसैले अहिले सहजै दया गर्ने र दया स्वीकार गर्नेहरु पनि भेटाउन नसकिने अवस्था कोरोनाले बनाएको छ ।
पछिल्लो ४ दिन यता नारायणगढ हँुदै गैंडाकोटकोटबाट अगाडि लाग्नेहरुको हुलका हुल आउने गरेको छ । बिहान होस, दिउसो होस या साँझ जुन सुकै बेला पनि मानिसहरु यो सुनसान राजमार्ग हुँदै ताँति लागेर अगाडि बढ्ने गरेका छन् । भर्खरका युवा देखि वृद्धहरु समेत सकिनसकी अगाडि पछाडि झोला बोकेर आफ्नो बाटो तताईरहेका देखिन्छन् ।
रामेछापदेखि सुर्खेतका लागि हिँडेका सुर्खेत निवासी ६५ बर्षीय कमल बुढाले रातदिन हिडेर ४ दिनमा गैडाकोटसम्म आएको बताउनुभयो ।
३ महिना अगाडि घर बनाउने कामका लागि रामेछापमा जानुभएका उहाँले त्यहाँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएको बताउनु हुन्छ ।
कोरोनाले सबै बन्द भएपछि काम पनि नभएको र बसेर खान पनि नपुग्ने अवस्था भएपछि हिँडेरै भएपनि घर जानभनि साथीभाई सबै जना हिँडेको उहाँले बताउनु भयो । सुर्खेत पुग्न अझै १५ दिन पैदल यात्रा गर्नु पर्ने उहाँ बताउनु हुन्छ । आफूहरुका पिडा नसोध्न उहाँको आग्रह छ ।
उहाँ जस्तै रामेछापमै घर बनाउने काम गर्ने जयबहादुर शाहीले एक हप्ता लगाएर गैंडाकोटसम्म आएको बताउनु भयो । रोडमा सुतेको, एक छाक खाने, एक छाक नखाने गरेर अहिलेसम्म धानिएको उहाँ बताउनु हुन्छ । आफ्ना खुट्टा सुनिएर हिड्नै नसक्ने अवस्था भइसकेको र कहाँ बेहोस भएर ढल्ने हो, कहा मरीने हो निकै पीडा भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । राज्यले आफूहरुका समस्यामा कुनै ध्यान नदिएको भन्दै उहाँले दुखेसो गर्नु भयो ।
त्यस्तै बलाराम कठायतले रामेछाप देखी काठमाडौं हुँदै काठमाडौंबाट चितवन हुँदै सुर्खेतको लागि हिडेको बताउनु भयो । ५० वर्षीय कठायतले यात्राको थकानले आफ्ना खुट्टा सुनियर हिड्नै नसक्ने भएको, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउन सुरु गरिसकेको भन्दै आफू बाटैमा बेहोस भएर ढलेर घर नपुग्दै बाटैमा मर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने संभावना भएको बताउनु भयो । अझै ४ सयभन्दा बढी किलोमिटरको यात्रा गर्नु पर्ने र त्यसका लागि कम्तिमा पनि १५ दिन लाग्ने कठायत बताउनु हुन्छ । आफ्ना नागरिकको यो अवस्था हुँदा पनि यो राज्यले नहेर्नु अन्याएको पनि हद भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । आफूहरु रोगले भन्दा पनि भोक र थकानले मर्नें अवस्था सृजना हुन सक्ने उहाको भनाइ छ ।
त्यस्तै तेही हुलमा थिए काठमाडौं देखि पाल्पाका लागि हिँडेका श्रमिकहरु जो काठमाडौंमा घर बनाउने काम गर्दै आएका थिए ।
लकडाउनपछि ठेकेदारले खान बस्न नदिएपछि पैदल यात्रा गरेर सडकमा सुत्दै घिसं्रदै घर जान हिँडेको बताउँदै थिए उनीहरु । सकुशल आफ्नो घर, आफनो परिवार, आमा बुबा भेट्न पाए जिन्दगीको त्यो भन्दा रमाइलो र आनन्दको समय कहिल्यै नहुने कल्पना गर्छन उनीहरु । थाकेर सिथिल बनेको शरीरमा त्यही घर परिवार, आमा, बुबा, श्रीमती, छोराछोरीको कल्पनाले उर्जा दिने गरेको र त्यही उर्जाले दिन रात नभनी भोकभोकै यात्रा गर्न साहास आएको बताउँछन् उनीहरु ।
पाल्पा घर बताउने जय बहादुरले कहिलेकाही यहाँका नेता र शासक देख्दा उनिहरुकै नाममा आत्म दाहा गर्न मन लाग्ने बताउनु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिक भोकभोकै रातदिन हिँड्दा पनि राज्यको कुनै भुमिका नदेखिनु कस्तो विडम्वना ? उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । ‘यस्तो गणतन्त्र भन्दा त बरु यो देशमा राजा नै ठिक थिए । अर्को निर्वाचन यिनले गर्लान नी बाँचिएछ भने मजदुरै भएपनि १० कक्षा सम्म अतिरिक्त गणित पढेको हुँ हिसाबकिताब मिलाउन जानेको छु’ उहाले आक्रोष व्यक्त गर्नु भयो ।
लकडाउनबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा उच्चस्तरीय समितिको बैठक जारी
कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी...
नेपालमा भेटिएनन् नयाँ कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को...
मेची हाइवेबाट कोरोना फैलने त्रास, हजारौंं सर्वसाधारण उच्च जोखिममा
पाँचथरमा मुख्य राजमार्गका पसलबाट कोरोना भाईरसको संक्रमण...
कोरोना अपडेट : विश्वभर एक लाख ८४ हजारको मृत्यु, २६ लाख बढी संक्रमित
विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीबाट विश्वभर एक लाख...
१. संखुवासभाको पहिरोमा बेपत्ता भएका ११ मध्ये ४ जनाको जिवितै उद्धार
२. जाजरकोटमा पहिरो : नौ जनाको शव भेटियो
३. संखुवासभामा पहिरो जाँदा ११ जना बेपत्ता, ८ घर पुरिए
४. सुनको मूल्य तोलामा ९२ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार
५. बबई नदीको बाढीमा बगेर दम्पत्ती बेपत्ता
६. महोत्तरीमा बाढी कहर : जताततै जलमग्न, जनजीवन अस्तव्यस्त
७. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लगाए मास्क
८. इन्द्रावती नदीमा बालकसहित तीन बेपत्ता
९. बाढीले बगाउँदा एकजनाको मृत्यु